New York Diesel mbanje yakatora nzvimbo yechipiri paHigh Times Marijuana Cup 2, 2001 na2003 kune yakanakisa sativa-indica yakayambuka. Hupenyu hwake hwakavanzika zvishoma, asi isu tinoziva kuti akawanikwa muNew York City uye nyeredzi padanho remanje wembanje. Anonunura zvakakwirira zvakakwirira uye nezvakawanda zvibereko. NY Diesel mhodzi dzinoburitsa dzakasimba uye dzakaumbana zvirimwa, kwete zvakawandisa mashizha, uye gobvu, dzakaoma buds. Mabukira ake anoratidza kapeti yetsvuku, orenji uye chena bvudzi uye ari kuputika neTC makristasi uye resin. Bhudzi rake repamusoro rinogona kukura zvakanyanya zvekuti iwe unofanirwa kurikanda! Ichiri kukura, New York City Diesel inogadzira kunhuwirira kunogutsa kwemuchero mutsvuku wakaibva uyo unokunda kumwe kunhuhwirira kwemakamuri. Utsi hwake hwakafanana nemafuta edhiziri, asi nekamonona kadiki. Iyo yakanakisa uye ine mbiri yepamusoro yakasimba uye inoyangarara.